प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र हस्तान्तरण, के छ यसमा ? - jillakhabar.com Nepal's Digital News site
Home ब्रेकिङ न्युज प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र हस्तान्तरण, के छ यसमा ?
प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र हस्तान्तरण, के छ यसमा ? ‘बायोम्याट्रिक’ सूचनासहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र भनेकाे के हाे ?
Posted By: जिल्लाखबर संवाददाताon: २४ असार २०७६, मंगलवार १४:०८
काठमाडौँ, २४ असार २०७६ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘बायोम्याट्रिक’ सूचनासहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र आज हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले उहाँलाई सो परिचयपत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यलाई पनि परिचयपत्र हस्तान्तरण गरियो ।
नेपाल सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रका विशिष्ट व्यक्ति, सिंहदरबारस्थित कर्मचारी र पाँचथर जिल्लाका ८० प्रतिशतलाई यो परिचयपत्र दिने कार्यक्रमअनुसार वितरण जारी छ । विभागले सोमबार उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरिसकेको छ । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकका सबै नागरिकलाई यो परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने योजना बनाएको छ । रासस
१२ वटा राशिमध्ये तपाइको आजकाे राशिफल यस्ताे छ ।
देश गृहयुद्दमा फस्ने खतरा- भोजपुरमा प्रहरी र विप्लव कार्यकर्ताबीच गोली हानाहान दुईको मृत्यु, एक घाइते